Ny vahoaka no tompon’ny teny farany ! (+vidéo) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Fantatra fa miverina mandray anjara amin’ny fanelanelanana ny krizy eto Madagasikara ny Dr. Simao sy ny ekipany. Miteraka fanahiana be ihany izany ho an’ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna satria isan’ny nanalava ny fotoana nitondran-dRajoelina ny fomba nandrindran’i Simao ny raharaha. Ankehitriny ary dia matahotra ny « légalistes » sao tsy mbola niova ny paikady mozambikana ka ho lasa fandanian’andro fotsiny sisa ny fandalovan’izy ireo eto amintsika. Na izany aza dia namafisin’ny mpiara-mitolona hatrany fa tsy mbola nivadika tamin’ny fankatoavany ny Filoha RAVALOMANANA ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy. Ho sasa-poana noho izany izay rehetra mikendry ny mifanohitra amin’ny fiverenany sy ny filatsahany ho fidiana.
Tsy hahazo fankatoavana …
Ny fototry ny fankatoavana dia miainga amin’ny vahoaka izay vao misandrahaka amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Efa nahazo ohatra velona amin’ny fitsipahan’ny vahoaka azy ny FATE tamin’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny taona 2010 teo. Hatreto mantsy dia tsy an-tany tsy am-parafara ny herin’izay nolazaina fa vokam-pifidianana. Fomba iray mahery vaika fanehoan’ny « be tsy miteny » ny heriny izany ary mampikatso ny toe-draharaha tokoa satria ny vahoaka aloha hatreto no andria-manjaka. Mbola miandry ny FATE ihany ny toe-javatra toa izany raha toa ka odiany tsy hita ny fitakian’ny Malagasy ny firotsahan’ny Filoha RAVALOMANANA. Amin’izao indray mitoraka izao kosa dia ahiana ho hentitra kokoa ny fandraisana andraikitry ny vahoaka satria efa voadona lalina hatramin’ny fiainana ara-tsosialy noho izao krizy izao.